दाँत पहेँलो भएर हाँसो लुकाउने गर्नुभएको छ ? ५ मिनेट मै दाँत चम्काउने यस्ता छन् – Samachar Pati
दाँत पहेँलो भएर हाँसो लुकाउने गर्नुभएको छ ? ५ मिनेट मै दाँत चम्काउने यस्ता छन्
दाँत चम्काउने रहर सबैको हुन्छ । पहेँलो दात लिएर हिड्दा लाज पनि अवश्य हुन्छ । यस्तो पहेलो दात हुनु खानपानको गलत बानीले पनि हुन सक्छ । दाँतमा कम उमेरमै पहेँलोपनको समस्या बढ्न सक्छ । यसले दाँतको माथिल्लो तह खराब हुनसक्छ र चमक कम हुनथाल्छ ।
दाँतको यस समस्याबाट बँच्न एक सानो उपायको प्रयोगले फाइदा पुर्याउन सक्छ ।आयुर्वेदिक एक्सपर्टका अनुसार, दाँत चम्काउने एक सजिलो उपाय छ ।जसलाई प्रयोग गरेको केवल पाँच मिनेटमै दाँतको पहेँलोपन कम हुन्छ ।
दाँत चम्काउनको लागि के गर्ने ? स्याउ, नाशपति र गाँजरलाई आफ्नो आहारमा समावेश गर्नुहोस् । यसले मुखमा सेलाइभा बढी बन्छ । दाँत सफा रहन्छ र दाँतको चमक बढाउँछ । साथै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नुहुँदैन । यसले दाँतको पहेँलोपन बढाउँछ ।
दाँत चम्काउने विधि – एक स्याउको टुक्राले दाँतमा हल्का रगड्नुहोस् । यसले दाँतको चमक बढाउँछ । स्याउमा मैलिक एसिड हुन्छ । यसले दाँतको पहेँलोपन हटाउँछ । यसको साथै बदाम या अखरोट खानुहोस् । यसले दाँतमा जमेको प्लाक सफा हुन्छ र पहेँलोपन हट्छ ।
ध्यान राख्नुहोस् – दाँतको चेकअप अवश्य गराउनुहोस् । यसले समयमै दाँतको रोगहरू पत्ता लाग्छ र दाँतको चमक रहिरहन्छ । चिया, कफीको सेवन गर्नुहुँदैन । यसमा कैफिन हुन्छ, जसले दाँतको पहेँलोपन बढाउँछ ।
दिनदिनै अम्बा खानुस्, मोटोपना घटाउनुस्
अण्डा खाएपछि फाेहाेर काे रूपमा फालिने अण्डाको बोक्रा यस्ता छन् फाइदा